Nepal sambat 1128 | Pardesh ko Chautari Baata (परदेशकाे चाैतारी बाट)
Nepal sambat 1128
November 10, 2007 at 12:01 am3comments
काल गणना बेगर इतिहास जान्न पनि सकिन्न र भविष्यको कल्पना कोर्न पनि सकिन्न । त्यसैले सभ्य मानव समाजका लागि काल गणना एउटा अत्यावश्यक वस्तु हो । मानव सभ्यताको उदयसंगै काल गणनाका दुई मुख्य प्रविधिको विकास भएको पाइन्छ – चन्द्रमाको गति अनुसार गरिने काल गणना र सूर्यको गति अनुसार गरिने काल गणना । ती प्रविधिहरुलाई सोही बमोजिम चन्द्रमानक पात्रो र सूर्यमानक पात्रो भनिन्छ । संसारमा अहिले पनि सूर्यमानक र चन्द्रमानक दुबै पात्रो चलनचल्तीमा छन् । ती मध्ये कुनै एउटा पात्रोको आधारमा एउटा विशेष कालखण्डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रथालाई संवत भन्ने गरिएको छ ।
विश्वमा प्रचलित संवतहरु मध्ये अधिकाँश संवतहरु कुनै धर्म, धार्मिक नेता वा शासकहरुको नाममा प्रचलनमा ल्याइएका छन् । चन्द्रमानक पात्रोमा आधारित नेपाल संवत विश्वको एक मात्र यस्तो संवत हो जुन देशको नाममा प्रचलनमा ल्याइएको छ । नेपालमा अत्यन्त हर्र्सोल्लासका साथ मनाइने चार्डपर्व मध्येको एक दिपावलीको रमाइलो पर्वका बीच इस्वी संवत २००७ नोभम्बर १० तारिख तदनुसार विक्रम संवत २०६४ कार्तिक २४ गते शनिवारको दिन नववर्ष नेपाल संवत ११२८ शुभारम्भ हुन गइरहेको छ । यस सुखद अवसरमा नेपाल संवत बारे इतिहासका केहि घटनाका साथै यस बारे लिइनु पर्ने सहि दृष्टिकोण सम्बन्धमा यो आलेख तयार गरिएको छ ।
नेपालको प्रारम्भिक इतिहास अत्यन्तै अस्पष्ट र अनुमान तथा किम्वदन्तीहरुले भरिएको छ । किरात कालमा नेपालमा कुन संवत प्रचलनमा थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन । लिच्छवी शासनको प्रारम्भसंगै नेपालमा निम्न संवतहरुलाई प्रचलनमा ल्याइएको पाइएको छ । शक संवत भारतका शक वंशीय शासकहरुको नामबाट चलाइएको संवत हो जुन आज पनि भारतमा राष्ट्रिय संवतको रुपमा प्रचलनमा छ । अहिले शक संवत १९२९ हो । नेपालमा यस संवतको प्रारम्भिक प्रयोग ५२७ वर्ष (ई.सं. ६०५) सम्म कायम रहृयो । त्यस पछि महासामन्त अंशुवर्माले राजा मानदेव द्वितीयको नाममा मानदेव संवत चलाए जुन २७६ वर्ष (ई.सं. ८८१) सम्म प्रचलनमा रहृयो । त्यस पछि राजा राघवदेवको पालामा नेपाल संवत चलाइयो जुन ८८८ वर्ष (ई.सं. १७६९) सम्म अविछिन्न रुपमा प्रचलनमा रहृयो । नेपाल संवत ८८८ अर्थात ई.सं. १७६९ मा नेपाल माथि विजय प्राप्त गरे पछि गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले शक संवतलाई पुनः प्रचलनमा ल्याए जुन १३२ (ई.सं. १९०१) सम्म कायम रहृयो । त्यस पछि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले भारतीय उपमहाद्वीपका एकजना रजौटा बिक्रमादित्यको नाममा चलाइएको बिक्रम संवत प्रचलनमा ल्याए जुन आजसम्म कायमै छ । अहिले बिक्रम संवत २०६४ हो । नेपालमा बिक्रम संवतले सरकारी मान्यता पाएको १०६ वर्षमात्र भएको छ ।
किरात शासन कालमा कुन संवत प्रयोगमा थियो भन्ने थाहा नभएको प्रसंगमा लिच्छवी शासकहरुले भारतमा प्रचलित शक संवतलाई नेपालमा प्रयोगमा ल्याउनुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन । मानदेव संवतको प्रादुर्भावले तत्कालीन शासकहरु भारतीय साँस्कृतिक प्रभावबाट मुक्त हुन खोजेको प्रतित हुन्छ । नेपाल संवत प्रादुर्भावको घटनाले नेपाली राष्ट्रवादले उच्चतम साँस्कृतिक विकास गरेको पुष्टी हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले देशकै नामबाट प्रचलित नेपाल संवत परित्याग गरी शक संवतलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउनुको कारण अलि बेग्लै छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्ने भनेर कहिल्यै भनेनन् । उनको मृत्यु पछि संकलित उनका महावाणीहरुमा पनि नेपाललाई एकीकरण गर्ने आसय झल्कने कुनै कुरा कतै छैन । बाँचुन्जेल उनले आफ्नो जीवनको उद्देश्य नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने बताउँदै रहे । सोही अनुरुप उनले हिन्दुस्तानी शक संवतलाई नेपालमा पुनर्जीवित गरेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसै गरी चन्द्र शमशेरले विक्रम संवत प्रचलनमा ल्याउनुको पछाडि दुई वटा कारण रहेको देखिन्छ । भारतको एकजना रजौटाको नाममा स्थापित यो संवत प्रयोग गर्दा नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने भावना जीवित राख्ने एउटा उद्देश्य पूरा हुन्थ्यो । चन्द्रमानक शक संवतको प्रत्येक तेस्रो वर्ष १३ महिनाको हुन्छ र सोही अनुसार राष्ट्रसेवकहरुलाई तलब दिनु पथ्र्यो । सूर्यमानक विक्रम संवतको सबै वर्ष १२ महिनाको हुन्छ । सूर्यमानक संवत अपनाउँदा राष्ट्रसेवकहरुलाई प्रत्येक वर्ष १२ महिनाको तलब दिए पुग्ने भएको हुनाले महाधूर्त चन्द्र शमशेर राणाले विक्रम संवत प्रयोगमा ल्याएको र त्यसबाट राज्यकोषमा बचत हुन आएको रकमबाट राणाहरुको आम्दानी बढाउने अर्को निहित उद्देश्य पनि पूरा गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल संवत प्रादुर्भावको प्रसंग एउटा अत्यन्त रोचक घटनासंग जोडिएको छ । उहिले नेपालका एकजना ज्योतिषले काठमाडौं विष्णुमति नदीको सहायक नदी लखुतिर्थबाट विशेष मन्त्रोचारण सहित मध्यरातमा निकालिएको बालुवा बिहान सुनमा परिणत हुन्छ भनी पत्ता लगाए छन् । उनले यो कुरा राजालाई बताए पछि राजाले सोहि अनुसार मध्यरातमा लखुतिर्थबाट बालुवा ल्याउन ज्यामीहरुलाई खटाएछन् । मध्यरातमा ज्यामीहरुले मन्त्र जस्तो लाग्ने अनौठो भाखा फलाक्दै बालुवा निकालेर बोरामा भर्न लागेको कुरा लखुतिर्थ किनारमा सौच गर्न निस्केका एकजना स्थानीय वासिन्दा शंखधर साख्वाले देखेर त्यस बारे सोधपुछ गरेछन् । मध्यरातमा बालुवा लिन आउनुको विशेष कारण बारे अनभिज्ञ ज्यामीहरुले हामी राजाको आदेशले बालुवा लिन आएको भनी बताए छन् । राजाले मध्यरातमा बालुवा लिन पठाउनुमा विशेष कारण हुन सक्छ भन्ने ठानी जिज्ञासु शंखधर साख्वाले म तिमीहरुलाई चाहिने जति ज्याला दिन्छु । बालुवाको यो खेप मेरो घरमा छोड्नू, अर्को खेप राजा कहाँ लैजानू भने छन् । दोहोरो ज्याला पाउने भए पछि सोझा ज्यामीहरुले पनि त्यसै गरेछन् ।
बिहान सखारै बाहिर निस्कन लागेका शंखधर साख्वाले घरको छिंडीमा राखेको बालुवा सुनमा परिणत भएको पाएछन् । यसरि अकस्मात रातारात धनी बनेका शंखधर साख्वाले जनहितकारी काम गर्ने उद्देश्यले त्यस बेला ऋणमा डुबेका प्रजाहरुको सम्पूर्ण ऋण तिरिदिने र उनको यस पुनीत कामलाई अमरत्व प्रदान गर्न राज्यले देशको नाममा नयाँ संवत चलाउन पर्ने शर्त सहित राजा राघवदेव समक्ष निवेदन गरेछन् । राजाले उनको निवेदन स्वीकार गरी मानदेव संवत ३०४ पूरा भएको भोलिपल्ट (अर्थात ई.सं. ८८१) तिहारको म्हपुजा (अर्थात गोवर्धन पूजा) को दिनदेखि लागु हुने गरी चन्द्रमानक पात्रोमा आधारित नेपाल संवत प्रचलनमा ल्याइएको घोषणा गरेछन् । यसरि देशको नामबाट चलाइएको विश्वको एक मात्र संवत नेपाल संवतको प्रादुर्भाव भयो । नेपाल संवतका प्रवर्तक कुनै राजा, रजौटा वा धार्मिक नेता नभएर काठमाडौंका एकजना र्सवसाधारण नागरिक शंखधर साख्वाको विशेष योगदान र पहलमा उक्त संवत स्थापना भएकोले उनै त्यसका प्रवर्तक हुन् भनी स्वीकार गर्दै केहि वर्षअघि नेपाल सरकारले उनलाई राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान समेत प्रदान गरिसकेको छ ।
ऋणमा डुबेका जनतालाई ऋणबाट मोचन गरेको महान उपलक्ष्यमा देशभक्तिको अनुपम नमुना स्वरुप स्थापित नेपाल संवतको प्रादुर्भावको प्रसंग आलोचनाबाट मुक्त छैन । यसका आलोचकहरु के आरोप लगाउँछन् भने मध्यरातमा मन्त्र फुकेर निकाल्दैमा खोलाको बालुवा सुनमा बदलिन्छ भन्नु मानिसलाई मूर्ख बनाउनु मात्र हो । राजा जनकले हलो जोत्दा खेतको माटो मुनिबाट शिला निस्के झैं निस्केकी सीताको अस्तित्व स्वीकार गरी उनलाई पूजा समेत गर्ने, गोरखनाथले छादेको बान्ता खान नमानेको तर सो बान्ता खुट्टामा लागेकोले पृथ्वीनारायण शाह विश्वको चक्रवर्ती सम्राट हुनुको सट्टा नेपालको मात्र राजा बने भनेर नथाक्ने यी महानुभावहरुले खोलाको बालुवाबाट सुनका कण संकलन गर्न सकिने सत्यलाई स्वीकार नगर्नु आर्श्चर्यजनक छ ।
हो, कथामा भनिए जस्तै शंखधर साख्वाको घरमा लगिएको सम्पूर्ण बालुवा सुनमा परिणत भएको भन्ने कुरा माथि शंका गर्ने ठाउँ छ । तर त्यस बालुवामा सुनका कणहरु हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । नेपालकै बोटे जातिका कतिपय मानिसहरु आज पनि खोलाको बालुवाबाट सुनको कण छानेर आय आर्जन गरी जीविका चलाइरहेको छन् भने त्यस बेलाको लखुतिर्थको बालुवामा सुनका कण पाइनु आर्श्चर्यको कुरा होइन । अहिले पो प्रदूषणले गर्दा त्यसमा सुनका कणको सट्टा अर्कै पहेंलों कुरा बग्छ । हिउँको सेतै लेदो बग्ने हुँदा सेती नदी भनिए जस्तै सुन पाइने भएरै पाटनको एउटा वस्तीका नामै लुँखुसि (सुनको नदी) नामाकरण गरिएको हुनु पर्छ । सुन पाइने वा सुनौलो बालुवा भएको कारणले सुनकोशीको नाम सुनकोशी राखिएको हुन सक्छ ।
कुनै पनि कुरालाई जुन रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यसै अनुरुप मात्र बुझदा त्यो बुझाई एकाँगी र अपूरो हुन जान्छ । प्रत्येक कुराको अध्ययन त्यसको ऐतिहासिकता र द्वन्दात्मकताको आलोकमा गरिनु पर्छ । त्यस पछि मात्र त्यसको सहि बुझाई वा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । राज्यले गर्ने हरेक काम राजनीतिबाट अलग रहन सक्तैन । नेपाल संवत लिच्छवी राजा मानदेव द्वितीयको नाममा प्रचलित मानदेव संवतलाई निषेध गरी आएको संवत हो । के शंखधर शाख्वाले प्रजाहरुको ऋण तिरिदिएकै कारण उनको इच्छा बमोजिम राजा राघवदेवले आफ्नै पुर्खाको नाममा स्थापित मानदेव संवतलाई खुसुक्क प्रतिसंहरण गरी लुसुक्क नेपाल संवत प्रचलनमा ल्याएको घोषणा गरेका होलान् । यस अहं प्रश्नको उत्तर खोजी गर्ने क्रममा त्यसको ऐतिहासिकता र द्वन्दतात्मकताको आधारमा नेपाल संवतलाई बुझदा त्यसको प्रादुर्भावका वास्तविक कारण बारे एउटा अलग्गै अन्तरकथा प्रस्तुत हुन आउँछ ।
एकजना प्रजाले अर्को प्रजालाई तिर्नु पर्ने ऋणसंग राजा राघवदेवलाई र उनको राज्यसंयन्त्रलाई केको चासो । त्यसैले शंखधर साख्वाले तिरिदिएको ऋण प्रजा-प्रजा बीचको ऋण नभएर राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर र जरिवाना भन्ने बुझिन्छ । शासक र शासित बीच नरम गरम द्वन्द चलिरहनु राज्य संचालनको सामान्य प्रकृया नै हो । रातीराती विष्णुमति पारी गएर ज्यामीहरुले लखुतिर्थबाट सुनयुक्त बालुवा निकाली शंखधर साख्वाको घरमा संकलन गर्नुलाई राज्यलाई तिर्नु पर्ने चर्को कर र जरिवानाबाट पीडित प्रजाहरु भूमिगत रुपमा संगठित भएको, विद्रोह गर्न अर्थ संकलन गरेको र ती सबैलाई श्रखधर साख्वाले संयोजन वा नेतृत्व गरेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरि पीडित प्रजाहरुको संगठित बल र संकलित अर्थ सहित आएका शंखधर साख्वाको प्रचण्ड दवावका अगाडि राजा राघवदेव झुक्न र प्रजाको माग बमोजिम नेपाल संवत घोषणा गर्न वाध्य भएको प्रतित हुन आउँछ ।
राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा शंखधर साख्वाले प्रजाहरुको ऋण तिरिदिएको घटनाले त्यति महत्व राख्दैन जति त्यसमा अन्तरनिहित देशप्रेम, राष्ट्रियताको भावना र जनताको संगठित बलले सामन्ती राज्यसत्तालाई झुकाउन सफल भएको कुराले महत्व राख्दछ । यस अर्थमा शंखधर साख्वालाई नेपाल संवतका प्रवर्तक मात्र होइन नेपालका प्रथम देशभक्त एवं राष्ट्रवादी जननेता मान्दा अतिसयोक्ति हुने छैन । देशको क्षेत्रफल बढे तापनि नेपाल संवत माथि प्रतिवन्ध लागेदेखि नेपालको राष्ट्रियता कुण्ठित भएको छ । र्सवसमावेशी नेपाली समाज निर्माणको महान प्रकृया अवरुद्ध भएर नेपालको शासनसत्तामा एउटा खास जातिको प्रभूत्व कायम भएको छ । त्यसको विरुद्ध आज देशमा गणतन्त्रको स्थापना र सबै जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता सहितको राज्य संरचना खोजिरहेका शक्तिहरुका लागि नेपाल संवत प्रादुर्भावको अन्तरकथा एउटा गतिलो सन्देश हुन सक्छ ।
नेपाल संवत र नेपालको सामाजिक जीवन
नेपालका केही अल्पसंख्यक धार्मिक वा जातीय समुहहरु बाहेक नेपाली जनताको अत्यधिक बहुसंख्याको धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक तथा जन्मदेखि मृत्युपछि समेतको कार्यमा नेपाल संवत अक्षुण्ण र अभिन्न रुपले गाँसिएको छ । हाम्रा बच्चाका पास्नीका साइतहरु, विवाह तथा व्रतवन्धका साइतहरु नेपाल संवतको तिथि बमोजिम तय गरिन्छन् । हामीले मनाउने जन्मोत्सवहरु, जीवित पुर्खाका जङक्वहरु (बुढा पास्नीहरु) नेपाल संवतकै तिथि अनुसार मनाइन्छन् । मृत पुर्खाका नाममा गरिने श्राद्ध, तर्पण, पीण्डपानी अर्पण गर्ने कार्यहरु नेपाल संवतकै तिथिको आधारमा गरिन्छन् । साउने संक्रान्ति, माघे संक्रान्ति जस्ता केहि अपवादलाई छोडेर संस्कृतिका धनी हामी नेपालीका असंख्य चार्डपर्वहरु नेपाल संवतकै तिथि अनुसार मनाइन्छन् । हाम्रा अधिकाँश चार्डपर्वहरु धर्मसंग गाँसिएका छन् । तर्सथ हाम्रा सम्पूर्ण धार्मिक कार्यहरु र चाडवपर्वहरु पनि नेपाल संवतकै तिथि अनुसार मनाइन्छन् । नेपालका जातिवादी शासकहरुले नेपाल संवतलाई राजकीय मान्यताबाट गलहत्याए तापनि यो संवत नेपाली जनजीवनको पलपलमा, रगरगमा अत्यन्त गहिर्राईका साथ अभिन्न रुपले भिजेर बसेको छ । कुनै आततायी शासक वा शासक गूटले प्रतिबन्ध लगाउँदैमा नेपाल संवतको अस्तित्व र प्रयोग समाप्त हुनुवाला छैन । हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा र रितिरिवाज जीवित रहेसम्म नेपाल संवतको अस्तित्व पनि जीवित रहने छ ।
नेपाल संवतलाई राज्यले गर्नुपर्ने व्यवहार
एक थरी मानिसहरु राज्यले नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतको मान्यता दिनु पर्ने माग सहित लामो समयदेखि आन्दोलित भइरहेका छन् । राष्ट्रप्रेमको अनुपम नमुनाको रुपमा स्थापित नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतको मान्यता दिनु पर्ने उनीहरुको माग शत प्रतिशत जायज र स्तुत्य छ । नेपाल संवतका प्रवर्तक शंखधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दिएर राज्यले उनीहरुको माग आँशिक रुपमा पूरा गरिदिएको पनि छ । तर र्सजकलाई राष्ट्रिय विभूति मान्न सक्ने राज्यले र्सजकको सिर्जनालाई मान्यता नदिनुबाट जनताको जायज माग र नेपालको राष्ट्रियता प्रति सत्तामा बस्नेहरुको संवेदनशीलता अझै कति कमजोर रहेछ भन्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल संवत कुनै जाति विशेषको एकलौटी पेवा होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सम्पति हो । कुनै चिजलाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने जस्तो महान काममा सबै जातजातिको सहमति, सहयोग र सहभागिता हुनु पर्ने हो । तर नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतको मान्यता दिनु पर्छ भनी आन्दोलित हुनेहरुमा नेवार जातिका मानिसहरुको बाहुल्यता रहँदै आएको छ । यसले जनमानसमा उनीहरुको माग विशुद्ध नेवारहरुको मात्र माग हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ । यो नेपाल संवत पक्षधर आन्दोलनकारीहरुको यो ठूलो कमजोरी हो । राम्रो काम गर्छु भन्नेहरुले त्यसको सबै जस आफूले पाउने नियतले होइन, सबैलाई समेटेर हिंड्न सक्नु पर्छ ।
एकजना देशभक्त धरतीपुत्रको प्रयासमा देशकै नामबाट स्थापित नेपाल संवत नेपालको राष्ट्रिय संवत हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । यसै तथ्यलाई मनन गरी पोहर नववर्ष नेपाल संवत ११२७ शुभारम्भ भएको सुखद उपलक्ष्यमा जनआन्दोनको शक्तिबाट स्थापित नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आवश्यक अध्ययन पश्चात नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्ने वचन दिनुभएको थियो । नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यो वाचा पूरा गर्ने शुभ दिन नजिक आइसकेको छ । त्यसका लागि नववर्ष नेपाल संवत ११२८ शुभारम्भ हुने दिनदेखि लागु हुने गरी त्यसलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्नु अति उत्तम साइत हुनेछ ।
नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्दा राष्ट्रले त्यसलाई राजकीय मान्यता मात्र दिने हो, राज्यकोषबाट केहि पनि खर्च गर्नु पदैन । देशकै नामबाट स्थापित संवतलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्दा देशद्रोही बाहेक कसैले त्यसको विरोध गर्ने छैन । सरकारले जनभावनाको उच्चतम कदर गरेको ठहरिने छ । कुण्ठित राष्ट्रिताले केहि मात्रामा भए पनि फक्रने अवसर पाउने छ । देशको नामबाट संवत चलाउने एक मात्र मुलुक भनेर विश्वमा नेपालको कीर्ति फैलिने छ र त्यस्तो देशको नागरिक हुन पाएकोमा देशभक्त नेपाली जनताले थप गौरव महसुस गर्ने छन् । तर यस्तो सुवर्ण अवसर उपयोग गर्नबाट चुकेमा त्यो वर्तमान सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
नेपाल संवत प्रयोग सम्बन्धमा थप कुरा
विश्वमा प्रचलित चन्द्रमानक वा सूर्यमानक कुनै पनि संवत समस्या मुक्त छैनन् । अत्यन्त वैज्ञानिक र विश्वनीय भइकन पनि चन्द्रमानक नेपाल संवतका पनि आफ्नै खाले समस्या र सिमाहरु छन् । प्रत्येक तेस्रो वर्ष १३ महिनाको हुनु, केहि तिथिहरुका बीचबीचमा टुटहरु हुनु र दुई दिनसम्म एकै तिथि पर्नु यसका समस्याहरु हुन् । मानिसको धार्मिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक जीवनमा यसले केहि फरक पार्दैन । तर द्रूत गतिमा चल्नु पर्ने र बढी भन्दा बढी यान्त्रिक बन्दै गएको वर्तमान समाजका लागि यसले केहि असुविधा सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय संवत घोषणा भए पछि पनि नेपाल संवतलाई कसरि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनु आवश्यक छ ।
यातायात तथा संचार प्रबिधीको अभूतपूर्व विकास, व्यवसायको विविधता तथा रोजगारीको अवसर, उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणले गर्दा विश्व मानव समाज एउटा ठूलो परिवारमा परिणत हुँदै गइरहेको छ । राम्रो नाराम्रो जे भए पनि नेपाल त्यस प्रकृयाबाट अलग रहन सक्तैन । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विश्व समुदायसंग र्सर्म्पक गर्न र राजकीय कामकाजलाई विश्वस्तरमा एकरुपता कायम गर्न दुई-संवतको नीति अपनाउनु पर्छ । यसका लागि हामीले संसारभरका मुलुकमा प्रचलित इसवी संवतलाई सरकारी तथा संस्थागत कामकाजको संवत (Business Calendar) को रुपमा अपनाउनु पर्छ । यसलाई हामीले अघोषित रुपमा अपनाउँदै आएका पनि छौं ।
नेपालले विश्वसर्म्पर्क र सरकारी कामकाजका लागि हाल प्रयोगमा रहेको विक्रम संवतको प्रयोगलाई नै निरन्तरता दिएमा पनि फरक पदैनथ्यो । तर विक्रम संवतको उद्गम थलो भारतमै पनि त्यसको प्रयोग अति सिमित ठाउँका सिमित मानिसहरुले सिमित प्रयोजनका लागि मात्र गर्ने भएको हुँदा हाम्रो उद्देश्यका लागि त्यो उपयुक्त छैन । तर्सथ नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय मान्यता र उच्च सम्मानका साथ सरकारी तथा संस्थागत कामकाजको संवत (Business Calendar) को रुपमा इस्वी संवतलाई मात्र प्रयोग गरिनु पर्छ र विक्रम संवतलाई विस्थापित गरी नेपाली जनतालाई हरदम तीन तीन वटा संवत मान्नु पर्ने झनझट र वाध्यताबाट मुक्त गरिनु पर्छ । अस्तु ।
साभार- समुद्रपारी डटकम
गोवर्द्धनपूजा अर्थात् म्हपूजाको दिन नेपाल संवता नया वर्ष सुरु हुन्छ । नेपालीहरू ऋणमोचन भएको दिनको सम्झना गर्दै नेपाल सम्वत् मनाइन्छ । नेपाल संवत् एक नेपाल पुत्रले चलाएको विशुद्ध संवत् हो । इतिहास पल्टाएर हेर्दा राजाका शासनकाल, देशमा घटेका प्रमुख घटनाका अभिलेख नेपाल संवतमा लेखिएका छन् । किरात, लिच्छवि र मल्लकालमा पनि नेपालभित्र नेपाल संवत्को प्रचलन थियो । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं लिदाका घटना पनि नेपाल संवतमा लेखिएबाट त्यसबखत पनि नेपालमा नेपाल संवत प्रचलन भएको प्रमाणित हुन्छ ।
नेपाल संवत लाई अंग्रेज सेनाका कर्नेल कर्क पेटि्रकले सन् १८१र्१र् इमा ‘अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल’ पुस्तकमा नेवार संवत् भनी लेखेका छन् । डेनियल राइटको ‘द हिष्ट्री अफ नेपाल’मा पनि राजाहरूको शासनकाल र प्रमुख घटना नेपाल सम्वत्मा दिई काल-ज्ञान सजिलो पार्नका लागि सम-साल इस्वी सनमा दिएका छन् ।
कनिङघमको भनाइअनुसार राघवदेवको समयमा नेपाल संवतको प्रारम्भ भएको हो । फेरि प्रो लेवीले राघवदेवले कुनै ठूला कार्य गरेर नेपाल संवत् चलाएको मान्न तयार नभएको तर्क पनि लेखकले अघि सारेका छन् । प्रो लेवीको भनाइअनुसार नेपालीहरू ८ को अंकलाई अशुभ मान्ने हुनाले त्यस समयमा शक संवत् ८०१ प्रारम्भ हुने भएकोले ८ झिकियो र संवत् १ हुनआएको र केही समय चलिसकेपछि यथार्थ बिर्सेर नया संवत् भनिन थालिएको भनेका छन् । प्रो लेवीले आफ्नो भनाइ वैजनाथ प्रशस्ति र लोकका संवतहरूका दृष्टान्त दिई पुष्टि गरेका पनि बताउछन् ।
वेन्डालले भेट्टाएको नेपाली वंशावलीमा राघवदेवको शासनकाल ८८० इतिर पर्छ र यसै समयदेखि नेपाल संवत्को प्रचलन भएको कनिङघमको भनाइलाई विद्वानहरूले सिद्ध गरेका छन् । लेखक भन्छन्, नेपाल संवत् सुरु भएको ३९९ वर्षो हाराहारीमा मात्र शंखधरको जन्म भएको थियो । किनभने शंखधरको किंवदन्तीमा आनन्द मल्लको नाम उल्लेख भएको र तिनको जन्म विसं १३०३, राज्यारोहण १३३१ र मृत्यु १३६५ मा भएको लेखेका छन् ।
प्रणय पासाको कथन अनुसार किंवदन्तीलाई आधार नमान्ने भए शंखधरको कथामात्र होइन, चीनबाट महामञ्जुश्री आई आफ्नो खड्गले चोभारको डाडा काटी काठमाडौं दहको पानी बाहिर पर्ठाई मानिसको बसोबास गराएका पशुपति, ज्योतिर्लिङ्ग र स्वयम्भू ज्योर्तिरूपका किंवदन्ती पनि नमान्ने त – नेपालको इतिहासका अनेकौं आधार किंवदन्तीहरूमा आधारित छन् । ती सबैलाई नमान्ने हो भने त इतिहासका आधारै के बाकी रहन्छन् र
किंवदन्ती नेपालको इतिहासमा मात्र होइन, रोमको उत्पत्तिबारे पनि प्रचलित छ । एउटा घासीले घास काट्न जंगल जादा एउटी बघिनीले मान्छेका दुएवटा बच्चालाई दूध खुवाउदै गरेकी देखेछन् । बघिनी दूध खुवाई बच्चालाई छोडी चारो खोज्न गएकी मौका छोपी घासीले बच्चा ल्याए । ठूलो बच्चाको नाम रोमुलास र सानो बच्चाको रेमाम राखियो । बघिनीको दूध खाएकाले दुवै दाजुभाइ बलवान थिए । हुर्केपछि ती दुइले त्यहाका राजालाई हर्राई आफू राजा भए र दाइ रोमुलासको नामबाट त्यस ठाउको नाम रोम हुनगयो भन्ने किंवदन्तीलाई के भन्ने –
फेरि प्रो सिल्वेन लेवी, कनिङघम, वेन्डाल, डेनियल राइट्स, कर्क पेटि्रक आदि समुद्रपारका इतिहासकारले हाम्रा पुर्खाका नाम उल्लेख गरिदिएनन् वा पुर्खा छैन भनिदिदैमा हामी पुर्खाविहीन भएको कुरा मान्ने – विदेशीले जे भने पनि ठीक भन्ने हाम्रो धारणालाई सच्याउन अत्यावश्यक छ ।
शंखधर साख्व साहूले सारा नेपालवासी ऋणीहरू ऋणमोचन भएको दिनको सम्झना अमर पार्न यो सम्वत् सुरु गरी नेपाल संवत् भनी नामकरण गरे- आजभन्दा ११२७ वर्षपहिले । यो दन्त्यकथा होइन, नत मनगढन्ते कथा हो । सत्यताको धरातलमा उभिएको ११२७ वर्षपुरानो यो इतिहास हो । यसले एकजना उदार हृदयी नेपालीले नेपालका समस्त ऋणीहरूमाथि दर्शाएको माया र उदारताको याद दिलाउछ ।
शंखधर साख्वले चाहेका भए विक्रमादिले आफ्नो नामबाट विक्रम संवत् चलाएझैं नेपाल संवतको ठाउमा शंखधर संवत् बनाउन सक्थे । तर तिनले आफ्नो नामभन्दा पनि देशको नामलाई अमर पार्न चाहे । राष्ट्रले चिरस्थायी बनाइराख्न यसलाई राष्ट्रिय संवत् बनाउनुपर्छ । किनभने यो संवतले निःस्वार्थ परहित गर्न प्रेरणा दिइरहन्छ ।
साभार- कान्तिपुर दैनिक
HD Image of Lunar from kaguya	Sony’s Latest Mini PC VGN-UX490N/C
1. suwal , seriz. | November 11, 2007 at 5:56 am
tapai ko lekh(article) samaya sandarvik lagyo…
baba pashupatinath ko kripa rahosh tapai maathi…
Nhyu Daya Lasataya Vintuna…
2. himalibabu | November 11, 2007 at 7:03 pm
May the happy new year nepal sambat 1128 brings lot of joy and happiness to all of us..
Nhyu Daya Lasataya Vintuna!!!
3. आज गोवर्धनपूजा तथा नेपाल सम्बत ११२९ « Pardesh Baata | October 29, 2008 at 12:04 am
[…] पूजा गर्ने चलन पनि छ । र आजै नेपालको आफ्नै सम्बत को नया बर्ष पनि परेको छ आज बाट नेपाल […]